musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nepal Kuputsa Nhau » Nepal: Chiroto chemufananidzo wemugwagwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
kutora mifananidzo muNepal
rakanyorwa Scott Mac Lennan
Kubhururuka ndiko kunonyanya kukwezva muNepal nematanho akadaro akadai seAnnapurna Circuit, Langtang uye Everest Base Camp inofamba kutumidza mashoma. Kufamba nenzira idzi dzakakurumbira kunodhira vanopfuura zana nemakumi mashanu ezviuru zvevashanyi pagore kuNepal. Semunhu anotakura zvinhu unogona kutarisira kuti paunopinda mumusha vana vese vanouya vachimhanya kuzodaidzira, "pikicha imwe chete ndapota." Ivo vanochida chaizvo kana iwe ukatora pikicha yavo wobva wavaratidza pane iyo LCD skrini yekamera yako. Asi havazi ivo chete vana vanofara kuve mumifananidzo yako, vangangoita wese muNepal anokumanikidza iwe pikicha.
Mai! Mai! Mufananidzo mumwe, pikicha imwe, ndapota.
Nepal inzvimbo yepasirese yekuenda kunzvimbo dzinoyevedza dzemakomo, ichizvirumbidza pamusoro pemakomo gumi nemana epamusoro soro pasi rose.
Pazasi pezvikomo zveGomo reEverest rakakura, vanhu veNepali vanowanzo fara kuti iwe utore mifananidzo yavo.
Izvi zvinotaura zvakanyanya kune yakasarudzika mafungiro nezvevashanyi uye nemasikirwo kugona kwekugamuchira vaeni kunotsanangura vanhu veNepali.
Kana iwe uchida kutora mifananidzo yakajeka yevanhu, zvivakwa kana yakasarudzika nzira dzemumigwagwa, ipapo uchave unofarira mikana yemifananidzo yeNepal. Iyo yaimbove Himalaya Kingdom, ikozvino nyika yedemokrasi inzvimbo yepasi rose yekuona nzvimbo dzemakomo, ichizvirova zvisere pamakomo gumi nemana akakwirira epasi rose kusanganisira Mount Everest, iyo yepamusoro soro Pasi. Asi pasi kubva kumatenga kune nyika yemhando inoshamisa uye yakasarudzika yemifananidzo sarudzo iyo inokwikwidza mafoto evasere vakuru.
Vanhu veNepali vari pakati pevanhu vanogara zvakanyanya pasi pano uye vanowanzo fara kuti iwe utore mafoto avo, chero uchinge wavaratidza pane kamera yako, vanozvida izvozvo. Kumativi kwetembere varume vatsvene vanozivikanwa saSadhu (dzimwe nguva Saadhu) vanogona kukumbira muripo wemazana zana rupees, yakaenzana nedhora reUS yekukuisira iwe asi vanhu vaungasangana navo mumugwagwa pamwe havangakubvunze chero chinhu. . Zvinongomira kufunga kuti iyo nyika uko kwemakore mazhinji pamusuwo weDashrath Rangasala Stadium, nhandare yakakura kwazvo yemabasa mazhinji munyika, paive nechiratidzo chakanzi "Muenzi ndiMwari" kana mundima yeSanskrit, Atithi Devo Bhawa. Inotaura zvakanyanya kune akajairika mafungire nezvevashanyi uye kugona kwepanyama kwekugamuchira vaeni kunotsanangudza vanhu veNepali, kugadzira Nepal imwe yepamusoro "yebhakiti rondedzero" nzvimbo.
Kuwedzera kune yakajeka "vanhu" kutora mifananidzo, kune nzira dzemumigwagwa muNepal dziri dzekunze uye dzakasarudzika. Semunhu anotora mifananidzo anoshanda muNepal, handina kuzombopererwa nenzvimbo yekutora mifananidzo uye kunyangwe mushure memakore mazhinji ndichitora mifananidzo yeNepal pese pandinovhura kona zvinoita sekunge pane chimwe chiitiko chakamirira kutorwa. Kune akawanda maoki nemakwenzi akamirira kuwanikwa munzvimbo dzakaita seguta guru reKathmandu uko kukura kusingatarisirwe, nekusafunga, kwakagadzira nzira chaiyo yemigwagwa yekudzungaira. Saka bhadharisa mabhatiri ako, fomata makadhi ako ekamera uye gadzirira vateereri vemumugwagwa kurota kuzadzika muNepal.
Kutora mifananidzo mumugwagwa ndekwekuisa shangu yeganda pasi uye kufamba uchirova, asi, ini pandakataura kuti migwagwa inogona kukurumidza kuita maze, hapana chikonzero chekushushikana uye unogona kufamba uchivimba nechiyero chevanhu vazhinji muNepal vanofunga. kugara kwako zvakanaka kuva chisungo chako pachako, kunyangwe dai vangosangana newe. Makore akati wandei apfuura mumwe mukadzi wechidiki aigara pamba pedu akafunga mushure meawa kana kuti kuti aifamba achitenderera, uye akavhiringidzika kuti oenda nenzira ipi kuti asvike pamba pedu. Akatisheedza parunhare rwake uye mudzimai wangu, muNepali chaiye, akamuraira kuti aende kuchitoro chiri padyo ndokutambidza chero munhu aripo. Kutevera hurukuro yemaminitsi mashanu muridzi wechitoro akavhara chitoro, akaisa muenzi akatsauka kumashure kwemudhudhudhu wake ndokumuendesa kumusuwo wedu wepamberi. Ndiyo mhando yekugamuchira vaeni iwe yaunowana muNepal. Iyi inzvimbo isina vanhu vanongokupa madhairekisheni, ivo vanokufambisa iwe pachako kuenda kwauri kuenda.
Pakati pemikana yakawanda yekutora mifananidzo muguta guru reKathmandu iva nechokwadi chekushanyira Asan Market, uko vanhu veko vanotenga, Swayambhunath iyo inowanzonzi "monkey temple," Boudha Stupa, iyo iconic stupa yakavakwa muzana re14th uye yakaratidzwa pane dzakawanda kushambadzira kushambadzira. yeNepal, uyezve Pashupati, iro zita rakajairika rePashupatinath Tembere, imwe yeakakosha matembere echiHindu muSouth Asia. Dzese dzenzvimbo idzi dzinopa huwandu hwakawanda hwemikana kune anofamba mufotori. Kune akawanda masangano ekushanya ayo acharonga rwendo rwekutora mifananidzo mumugwagwa, kana iwe unogona kungotora mepu wobva wabuda wega. Kathmandu iguta rakazadzwa netsika uye nzvimbo dzakasiyana nedzimwe nzvimbo dzePasi uye pane mikana isingaverengeki yekutora mifananidzo imomo, uye kutaura chokwadi muNepal yose kubva pakakwirira peEverest kusvika kuTerai, nzvimbo dzakadzika dzeNepal panowanikwa nzvimbo yekuzvarwa yeBuddha.
Mumwe mutori wemifananidzo akataura nezvekutora mifananidzo mumugwagwa muNepal kuti "Chaotically Cool" uye ndiyo tsananguro yakakodzera yeimwe yenzvimbo dzakasarudzika dzakasara paPasi.
Scott MacLennan mushandi anoshanda wemifananidzo muNepal.
Basa rangu rakaonekwa pane anotevera mawebhusaiti kana muzvinyorwa zvakadhindwa zvine chekuita nemawebhusaiti aya. Ndine makore anopfuura makumi mana echiitiko mukutora mifananidzo, firimu, uye odhiyo kugadzirwa.
Studio yangu muNepal, Her Farm Films, ndiyo studio yakashongedzerwa zvakanyanya uye inogona kuburitsa zvaunoda zvemifananidzo, mavhidhiyo, uye mafaera ekuteerera uye vese vashandi veHer Farm Mafirimu madzimai andakadzidzisa.
Ikozvino hutachiona hwe COVID kuBeach Holiday Nzvimbo